आफ्नो हातले ढोका सटही। ढोकामा सटही स्थापना गर्न कसरी
ढोका सटही कुनै पनि विशेष कठिनाई गर्न फरक छैन। तर, यस्तो काम गर्न दृष्टिकोण यसलाई धेरै हदसम्म स्थापित ढोका को आकर्षण मा निर्भर गर्दछ गुणवत्ता casings सही स्थापना छ किनभने, गम्भीर लग्नु गर्नुपर्छ।
casings को प्रकार
आफ्नो हातले सटही ढोका प्राकृतिक काठ, MDF या प्लास्टिक बनेको ढाला उत्पादनहरू प्रयोग प्रदर्शन हुन सक्छ। विशेषज्ञहरु कडा MDF या पीवीसी बनेको मंडित वा शैल casings प्रयोग गर्न पहिलो रिसोर्ट सुझाव दिन्छौं। त्यसैले चिस्यान, जोखिम स्टीम र गंभीर तापमान परिवर्तन को Clypeus डर छैन। निस्सन्देह, सबै भन्दा प्राकृतिक काठ ट्रिम को सौंदर्य नजर को मामला मा आकर्षक। एकै समयमा, यो विकल्प सबैभन्दा महंगा छ।
सामाग्री casings निर्माण र माउन्ट सुविधाहरू
माथि उल्लेख रूपमा, धेरै साधारण सामाग्री निर्माण casings छन्: काठ, MDF र प्लास्टिक। हामी काठ उत्पादनहरु को स्थापना कुरा भने, यो मामला मा ढोका को सटही अवतरण casings संग गर्न सकिन्छ मा तरल नङ टोपी बिना सबैभन्दा नाजुक नङ को रूप मा वा बन्धन। इच्छित भने, टोपी सफासँग हुन सक्छ आफैलाई कटौती। casings मिलाउँदै धातु नङ छलावरण लगान टोपी एक्रिलिक सीलेंट वा सुधारात्मक थप ध्यान हेर्न संग मोम पेन्सिल।
अगाडि सटही ढोका Trims MDF एक विशेष तरिकामा बाहिर छ। बारहरू को उपस्थिति सबैभन्दा आकर्षक र प्राकृतिक काठ नजिक रहेका गर्न, बन्धन नङ लागि सबै पायलट प्वालहरू अग्रिम drilled छन्। वैकल्पिक रूपमा, MDF बनेको फ्रेम समान काठ उत्पादन फँस गर्न सकिन्छ।
दोष को उपस्थिति जोगिन गर्न प्लास्टिक casings लागि रूप, तिनीहरू चिपके गर्न सिफारिस गरिएको हो। यस मामला मा, प्लास्टिक उत्पादन पूर्ण पर्खालहरु को प्रभावशाली अनियमितताहरु ओभरल्याप छन्।
ढोका सटही उपकरण को एक पुरा शस्त्रागार आवश्यक छ। लागि काम छिटो र गुणस्तर कार्यान्वयन निम्न आवश्यक हुनेछ:
स्लाइड मिटर देख्यो अन्त;
ढोका कसरी सटही गर्छन्? कार्य गर्न अघि बढ्नु अघि, तपाईं आसन्न पर्खाल सतह पङ्क्तिबद्ध हेरचाह गर्न आवश्यक छ। पूर्ण समतल चिल्लो पर्खालहरु को उपस्थिति casings स्थापना को लागि एक जरूरी छ। अन्यथा नौका र पर्खाल बीच महत्वपूर्ण अंतराल को एक उच्च सम्भावना छ। अन्य कुराहरु, यो सानो खरोंच को पनि उपस्थिति अनावश्यक फोहोर entail थियो जो उत्पादन, को आकर्षक उपस्थिति बिगार्न सक्छ किनभने, सही आफूलाई aprons व्यवहार सम्भव हुनुपर्छ।
काम को प्रदर्शन मुख्य nuances
को टोपी प्रयोग गर्नुपर्छ लुकाउन, ट्रिमहरू नङ अदृश्य गरिएका माउन्ट एक्रिलिक सीलेंट, जसको रंग छाया सतहहरु पारस्परिक रहेको छ। चिल्लो पर्खालहरु को उपस्थिति मा ढोका सटही तरल नङ को प्रयोग अनुमति दिनुभएको छ। यसरी आधारभूत जटिलता व्यक्तिगत slats बीच सजिलै देखिने अंतराल को घटना रोकन रहनेछ।
माथिल्लो केसिङ किनारा slats को काटन समयमा गल्ती नगर्न क्रममा ठाडो भागहरु लागि जन्म दिन। casings को स्थापना गर्न यो दृष्टिकोण निर्माण को सबै तत्व को पूर्ण संयोग हासिल गर्न सक्षम बनाउँछ।
ढोका सटही - स्थापना
माउन्ट ढोका ट्रिमहरू लगातार चरणमा एक नम्बर अनुसार गरिन्छ:
तपाईं पहिलो कुनै पनि यदि, पुरानो सटही फुकाल्नु पर्छ। यी काम सामना एकदम सरल छ। एउटा सानो पेचकस को पर्याप्त वा जो मार्फत पुरानो केसिङ poddevat माउन्ट। मुख्य कुरा हो - गर्न क्षति कारण छैन को doorframe। पनि निराकरण आवश्यक अन्तमा संडसी उपयोग, नङ हटाउन।
ढोकामा सटही स्थापना कसरी गर्ने? पुरानो casings को समाप्तिन्यू को अन्त मा नयाँ dobornyh बारहरू को स्थापना प्रक्रिया गर्न आवश्यक छ। यो कारखाना ट्रिम किनारा बाट उत्पादनहरु प्राथमिकता दिन सिफारिस गरिएको छ।
पहिलो बायाँ र इच्छित उचाइ को लम्बाइ अनुसार कटौती जुन स्ट्रिप्स, को अन्तिम विधानसभा लागि सही मिलाएका छौं। प्रदर्शन काम सेट माथिल्लो सीमा जस्तै सिद्धान्त अनुसार पछि। निर्माण बलियो बनाउन र माथिल्लो पक्ष transoms स्क्रू संग fastened गर्न सकिन्छ।
को परिधि वरिपरि स्थिर ट्रिम ढोका फ्रेम, सही वा बायाँ केसिङ को स्थापना संग शुरू।
45 ° कोण मा निर्माण क्षेत्र र एक प्यानल देख्यो, घिसना सटही किनारा प्रयोग गरेर। कोण एक पेन्सिल चिनो लगाइएको छ, र चिटिक्क गहरा ~ घाउ ~ गरिन्छ। यो बचा जब विकृति र अगाडि सतह मा छिल गर्नुपर्छ। यस्तो काम को प्रदर्शन प्राथमिकता कम दाँत संग आरी दिन राम्रो छ।
पिए कोण परिणाम मूल्य5मिमी भत्ता को रूप मा थपिएको छ, जो पछि माथिल्लो transoms, को तल कवर तल्ला देखि दूरी मापन पछि। को पहिले सञ्चय eclipsing कोण सटही को परिणामस्वरूप लम्बाइ। अनावश्यक माथिल्लो भाग एक पहेली वा राम्रो देख्यो कटौती गरिएको छ। त्यहाँ जो मामला मा आवश्यक लम्बाइ यसको भित्री किनारा द्वारा निर्धारण गर्न नाली मा एक दृढता, सटही छ भने।
कसरी ढोका सटही पिट्न? एक ढोका पट्टी वा ब्लक संलग्न सानो नङ को एक हथौडा र सटही को माध्यम द्वारा। को नङ टाउको संडसी काटन को माध्यम द्वारा सबैभन्दा सुविधाजनक छन् हटाउन। नङ हरेक 50 सेमी भन्दा अधिक को अंतराल मा कुल सिफारिस गरिएको।
सबै चरणमा एक लगातार उत्सव मा माथि काम फलस्वरूप सिद्ध भएको ठीक slits सटही ध्यान हुन सक्छ ढोका को रंग अन्तर्गत चुनिएको छ जो छाया एक विशेष सीलेंट, संग लुकाउन सबै संविधान तत्व को सामेल हासिल गरेको छ भने। ढोका फ्रेम पछाडि तर्फ देखि माउन्ट casings नै सिद्धान्त मा बाहिर छ।
आफ्नै हातले gable बसाई सराई SHEATHING
खण्डका छत: डिजाइन, स्थापना, मर्मत। तन्काउनुहोस् किन्नुहोस छत Rostov-मा-डन
घरमा वाशिंग मिसिन को मरम्मत
त्यो पहिलो - निलम्बित छत वा वालपेपर? wallpapering, वा विपरित पछि छत बनाउन?
कसरी ताकि टूट छैन ओवन अप ढाक्न: सिफारिसहरू
गैर-budgetary धन गर्न बीमा प्रीमियम र आफ्नो भुक्तानी लागि प्रक्रिया
घरमा बैंगनी। लक्षण तपाईं जान्नुपर्दछ!
मेजानाइन - यो भित्री एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो। मेजानाइन संग Wardrobe
सुरक्षा घेरा - खाट को लागि Bumpers। बेबी विशेष प्रकार ओछ्यान तन्ना
पुरानो rhinitis: लक्षण र उपचार
एक बच्चाको परित्याग
विमानस्थलमा एक ट्याक्सी कल कसरी?
उत्तर पोर्ट को Yenisei मा